မြန်မာ, 23 ဇူလိုင် 2017
23 ဇူလိုင် 2017 တနင်္ဂနွေ
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ကွယ်လွန်မှု ၅၃နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သူ ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာကြီး ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ "သူမနာ-ကိုယ်မနာ" ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်အတိုင်း စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကို ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ကွယ်လွန်ခြင်း(၅၃)နှစ်ပြည့်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေက တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။
အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက် မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား နှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေးအရ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ လက်ကျန်ဆက်စပ်မှုတွေကို လက်ရှိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ လုံးဝဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ အမေရိကန်ဘက်က လိုလားကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရ အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးက ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာသတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို အလုပ်လုပ်ဖို့ သွားတာမှာ ဗီဇာမပါဘဲ ခိုးဝင်သွားတဲ့အတွက် မြန်မာ အလုပ်သမား ၅၀ ကျော် ပြန်ပို့ခံရပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတိုးတက်ဖို့၊ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကုလပူးပေါင်းစေလိုကြောင်း၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေသုံးသပ်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာယန်ဟီးလီ ခရီးစဉ်အပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဟာ ယေဘူယျဆန်တဲ့စွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ မှားယွင်းတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကကြေညာချက် ထုတ်ပါတယ်။ အခုလို အစိုးရဘက်က သူတို့ရဲ့အမြင်ကို ချက်ခြင်းတုန့်ပြန်တာဟာ ကောင်းပေမဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မယ့် အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်မှာ ကုလနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေချင်တယ်လို့ တိုက်တွန်းမှုတွေရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေးမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာ ကွယ်နိုင်ရေးဟာ အလွန်အရေးပါတယ်ဆိုတာကို လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ ခံယူထားပြီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရေသယံဇာတနဲ့ ဘေး အန္တရာယ်များဆိုင်ရာ တတိယအကြိမ် ကုလသမဂ္ဂအထူးအစည်းအဝေး တက်ရောက်လာတဲ့ ဒုသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကပြောပါတယ်။
NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပါတီကနေ နှုတ်ထွက်
NLD ပါတီရဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ဝင်းဟာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း NLD ပါတီကနေ ပထမဆုံး နှုတ်ထွက်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားမှုတွေကြားက TNLA နဲ့ တပ်မတော်အကြား တိုက်ပွဲတွေရှိဆဲ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်နဲ့ သီပေါမြို့နယ်တွေမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်က ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး၊ သောကြာနေ့တုန်းက တအာင်းပလောင် TNLA တပ်ဖွဲ့နဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
Dr. Yanghee Lee ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ယေဘုယျဆန်တဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ မှားယွင်းတဲ့အချက်များစွာ ပါဝင် နေတယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ် ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျတဲ့အတွက် ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်း ထောက်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းအခြေအနေဟာ ရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် မူစလင် အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အခြေအနေဟာ တိုးတက်မှု နှေးကွေးနေသေးတဲ့အပြင် အစိုးရသစ်အနေနဲ့ အရင်အစိုးရ လက်ထက်က ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ မဟာဗျူဟာတွေကို ဆက်ပြီး မကျင့်သုံးဖို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Dr.Yanghee Lee က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
The Voice အယ်ဒီတာချုပ် နဲ့ ဆောင်းပါးရှင်ကို သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့ပါ အရေးယူပေးဖို့ တပ်ရဲ့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားမှု တရားရုံးလက်ခံ
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ကတည်းက The Voice Weekly အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ဗြိတိ သျှကိုကိုမောင်တို့ကို သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေနဲ့ပါ အရေးယူပေးဖို့ တပ်မတော်ဘက်က ဗဟန်းတရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားမှုကိုလက်ခံစစ်ဆေးဖို့ တရားရုံး သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတဝှမ်း လူကိုးသောင်း ရေဘေးသင့်
ဒီနှစ် မိုးရာသီမှာ ရေကြီးရေလျံမှု အဓိက ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းတွင်း၊ ဧရာဝတီနဲ့ သံလွင်မြစ်ရေကြီးတာကြောင့် ဇူလိုင်လဆန်းက ဒီနေ့အချိန်ထိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူ ၉သောင်းလောက် ရှိပြီး မကွေးတိုင်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံးခံစားရတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနက အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးအောင်က ပြောပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၀၇. ၂၁. ၂၀၁၇